Mobile iri Pano. Yako Saiti HAIYO. | Martech Zone
NeChishanu, Gumiguru 7, 2011 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Isu takamhanyisa sarudzo yedu svondo rapfuura uye tikabvunza kuti mangani emasaiti ako emakambani akagadziridzwa kuti vatarise nhare. Yedu Zoomerang sarudzo mhedzisiro yacho yakatove 50/50 yakatsemurwa… hafu yenyu ine mawebhusaiti emakambani akagadzirira kuona nhare kana kunenge ikoko. Chiverengero chinosuruvarisa.
Chiverengero chinosuruvarisa nekuti nharembozha iri ndatove pano. Comscore ichangoburitsa dhata iyo 48% yevaAmerica mamirioni 112 vanoshandisa mbozhanhare izvozvi gara uchishandisa zvishandiso zvavo kuti uwane zvemukati midhiya, kunze kwenzwi kana chinyorwa uye kuti ichapfuura 50% pakupera kwegore.
Masosi makuru ari kuzivisa chikamu chakakura chemotokari yavo ichibva kunhare: Iyo New York Times inowana 7.6%, USA Nhasi inowana 10% uye LA Times inowana 11.2%. Masocial media masaiti ari kuona kukura kukuru, ingangoita 12.5%… uye vaverengi vari kugara zvakapetwa ka2.8!
Isu tangotumira ichangoburwa posvo yakapa 10 nzira dzekuburitsa yako saiti zvemukati pane mbozhanhare nhare. Izvo hazvidi kuti yako yemukati manejimendi system ive nhare yakagadzirira kunyangwe iyo iri kazhinji mhinduro iri nani.
Shamwari dzedu pa Marketpath ichangobva kusimudzira yavo nhare zvipiriso, zvichiti:
Kugadzira nharembozha yewebhusaiti yako inopa vateereri vako mhinduro inosangana nezvavanoda nhare, izvo zvakasiyana zvakanyanya kupfuura izvo zvido zvevashandisi vetsika komputa kana desktop desktop. Vashandisi veinternet mbozhanhare vanoda mawebhusaiti ari nyore, anokurumidza, uye ari nyore kufamba, uye ayo anopa zvirimo zvinoenderana nemushandisi wemafoni.
Kana iwe uri kushanda neye software sevhisi mupi iyo isina nzira yekutarisa yako zvirimo zvinobatika pane mbozhanhare mbozha, urikutoisa traffic yako panjodzi yakanyanya. Ndiri kushamisika nekuwanda kwehurongwa huripo kunze uko husati hwatotanga kugadzira nhare mbozha, haufungi nezve mobile-optimized interface.
Gumiguru 7, 2011 pa 1:49 AM
Ndiri kupisa nekuti ndiri mobile! Iwe haudi iwe kwete! Ichi ndicho chikonzero, ichi ndicho chikonzero, ichi ndicho chikonzero ndiri kupisa!